Bilaogera & Raharaha Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2017 3:30 GMT
Tatitra momba ny fandaharan'asa nokleary Iraniana nalefan'ny IAEA tany amin'ny Filan-kevitry ny Fiarovana ao amin'ny Firenena Mikambana. Manana zavatra maro hozaraina mikasika ity hetsika lehibe ity ny bilaogera.
Abtahi, filoha lefitra teo aloha, nilaza fa mahasoa ho an'ny firenena ny angovo nokleary milamina ary afaka manome hery an'i Iran. Saingy tsy tokony handrava ny firenena ho amin'izany isika. Handray ny hevitro ho mariky ny tahotra ny sasany. Aleoko izay toy izay mahita ny fireneko ringana. Milaza izy fa mivavaka mba ho arovan’ Andriamanitra i Iran sy ny Iraniana amin'ity toe-javatra mampidi-doza ity.
Alpar, bilaogy iray malaza, nanoratra fa olan'ny fanjakana Iraniana ny olana ara-nokleary ary tsy maintsy mamaha izany izy. Tsy mbola nangatahana hiteny na hilaza ny heviny momba ny angovo nokleary ny firenena Iraniana. Niteraka ity olana ity ny Fanjakana Iraniana, noho izany tsy tokony hijaly ny firenena Iraniana. Mivavaka ity bilaogera ity mba homen’ Andriamanitra faharanitan-tsaina kely ireo mpitondra Iraniana.
Hoder, bilaogera monina ao Kanada niezaka nitady vahaolana. Hoy izy:
Ashoob (Persiana), bilaogera monina Iran te haneho hevitra amin'ny alalan'ny hiran'i Pink Floyd:
Ao amin'ny bilaogin'i Hojreh (Persiana), tanora mpitondra fivavahana, mahita rohy mankany amin'ny tranonkala iray mampiroborobo ny Angovo Nokleary Milamina amin'ny teny Persiana isika. Ao amin'izany tranokala izany, nangatahana ireo mpitsidika mba handefa mailaka any amin'ny IAEA, milaza fa mila angovo nokleary mitandro ny fandriampahalemana izy ireo.